SomaliTalk.com » Federaalka Soomaaliya:daawo halis badan oo gacanta loo geliyey aabbe masuul ah!
Federaalka Soomaaliya:daawo halis badan oo gacanta loo geliyey aabbe masuul ah!
Federalka Soomaaliya dastuurkeeda lagu dhigey waan garaneynaa duruuftuu ku yimid iyo sida lagu keeney. Ma aheyn arrin si sax ah oo bulshadu ku wada qanacsantahey oo afti loo qaadey ku timid. Waa wax ku yimid gacan maroojin ka timid soomaalida qaar iyo shisheeye is kaashadey iyadoo laga faa,iideystey kala daadsanaanta iyo midba gees taagnaanta ku dhacdey bulshada soomaaliyeed.
Laguma eedeyn karo ayaan qabaa Sh.Shariif iyo siyaasiyiintii kale ee oggolaadey oo arrintaas in dastuurka lagu darona aqbaley iyagoon ku qanacsaneyn. Haddey diidaan inaan waxba hir gelin oo la kala taagnaado ayaa ka dhalan laheyd. Marka in federaalka dastuurka lagu qorey haddey cidi leedahey eeddeeda waa dadkii watey oo sida jujuubkaa iyagoo duruufta jirta ka faa,iideysanaya meesha usoo geliyey.Haddana dhib ma jiro oo waa qabyo qoraal dastuur oo ama lagu diidi doono ama lagu ansixin doono afti dadweyne.Haddii loo baahdo dadkaa lagu wacyi gelin karaa iney diidaan, haddii sharcigu saamaxayana baarlamaankaa laali doona.Mana jirto beel gaar ah oo dadka ka sarreysa oo iyadu kaligeed leh vito ay sharci aan inta kale rabin ku qasbi karta.
Federaalka Soomaaliya loo rabo waa midka ka muuqda Puntland oo dhab ahaantii aysan jirin wax la taaban karo oo ay uga geddisantahey Somaliland. Federalka ka muuqda Puntland waxaa dhaanta in si caadi ah loo kala tago oo aan la isku tashan. Sababtoo ah dowladda dhexe culeyskeedina wuxuu saaranyahey caasimadda, caasimaddana lagama xukumo Puntland. Mana cadda cid sheegi kartaana ma jirto qaab la isku waafajin karo Puntland iyo dowladda dhexe. Waxaa weeye “kaagana kula lihi keygana anaa iska leh”!
Kenya iyo qabaa,ilka qeylyayana waxey u faro baxsanayaan iney daawadaas u isticmaalaan sidey wax u dileysey. Kenya iyo qabaa,il toona xaq uma lahan iney federalka gacantooda saaraane dowladdaa iska leh qaabeyntiisa iyo hirgelintiisa iyo laalitaankiisaba.